iPal: AvatarMind's humanoid robhoti iyo inogona kuve yakagadzirirwa nekuda kweROS uye Android | Linux Vakapindwa muropa
AvatarMind iri kugadzirira mbozhanhare humanoid robhoti inokwanisa kuchinjiswa nenzira ye SDK inoshanda nekutenda kune inoshanda system. Android uye ROS. Iyo kambani iri kushanda pachirongwa ichi uye nguva pfupi yadarika yakatanga kutumira yekutanga vhezheni yerobhoti kuChina, uye vhezheni yemusika weUS yave kugadzirirwa. Iko kushandiswa kweiri robhoti kunoratidzika kunge kwakanangana nevana, seshamwari yediki diki yeimba, kunyanya avo vane zvidikanwi, kunyangwe zvirongwa zvichishandiswa kuita kuti vakweguru uye vari muchipatara varwere kambani. Asi hazvingogumiri pane izvo, sezvo iine zvakare zvekudzidzisa uye zvehutano zvekushandisa.
Robhoti yatiri kutaura nezvayo ndiyo yaunoona pamufananidzo uye inonzi iPal. Iyo inoyera zvinopfuura mita imwe, kunyanya 105 cm kukwirira uye inokwanisa kufamba senge munhu, sezvainongoita iwo humanoid chitarisiko chatakatotaura nezvacho. Ane kugona kutaurirana nevanhu uye kunzwisisa mutauro wevanhu zvinonzwisisika. Iyo iPal inokwanisa kuona nekupindura kune akasiyana manzwiro uye inogona kusiyanisa pakati pemubvunzo nemhinduro nezwi reizwi revanhu vaine hukama navo. Ichaonawo zviso, kugona kutevera zvinhu uye kushanda nemazizi, kudzidza zvinofarirwa uye zvinoitwa nenhengo dzemhuri dzinozvitambira, nezvimwe.
Iine kugona kugadzirirwa kuimba nziyo, kutaura nyaya, kutamba, kudzidzisa Chirungu, masvomhu, sainzi, tekinoroji, uye mimwe misoro. Mushure meye prototypes akadzidziswa kuCES 2017 ikozvino zvinoita sekunge zvese zvagadzirira yako kushambadzira muAsia neAmerica, pamwe kunonoka 2017 kana kutanga kwa2018. Uye kugadzirisa hunhu hwayo nekuidzora, iwe unotoziva kuti une SKD yakavakirwa Android neROS.
Robhoti ine maoko, maoko nezvigunwe (pasina kubata basa), makumbo (asi inofambiswa nemavhiri mana pazasi payo), uye musoro unoipa iyo semi-humanoid kutaridzika, ichave nemutengo wakachipa wekutanga weiyo inosanganisirwa tekinoroji .mu. Ndokunge, kune ese hunyanzvi hwaunayo, $ 1500 kana $ 2000 hausi mutengo wakanyanya kwazvo Saka iPal inobatana nerunyorwa rurefu rwemarobhoti neLinux, saPepper iyo yatakatotaura nezvayo pano nevamwe vazhinji ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » iPal: AvatarMind's humanoid robhoti iyo inogona kuve yakagadzirirwa nekuda kweROS uye Android